Ukupakishwa kweplastikhi, Isikhongozelo seAluminiyam, Yenza iTyhubhu-HEYPACK
Ukupakisha kunye nesiqulatho
Ibhotile, Tube, Jar
Ibhotile ye-Hdpe / PP
Ibhafu kunye neenwele
IAluminiyam / iTyhubhu yePlastiki
Qengqeleka kwiBhotile / kwiDeodorant Bottle
Impompo / sisitshizi Bottle
Impilo kunye neKhaya
Kubandakanya ukulungiswa kwezinto ezintsha ,. Iibhotile ezinombala zenza ukwenza, ukuvutha kwebhotile kunye nokutofa. Ukulahlwa komphezulu njenge-electroplating, Skincare. Pearly, Engraving.Uyilo lokuprinta njengokufaka iilebheli, ushicilelo lwe-Ofiset, ushicilelo lweScreen, iGolide / iSilivere / Ukunyathela kweRose njl.
QALISA UKUPAKISWA NGO-2003
Jonga umzi-mveliso wethu
Ukulahlwa komphezulu kunye nokuPrinta
Imibala e-1-4 yokuprinta kwesikrini, ilungele ulwazi lwemveliso, ilog elula
Isilivere, iGolide, iRose Gold, isuti yokunyathela eshushu emfusa yelogo
Imhlophe, iselubala, ifanitshala enombala wezityalo, umntu.
Matte omnyama, matte omhlophe, okanye ngenye indlela umbala weprod ekumgangatho ophezulu
Ibhotile eprinta ileyibhile
Ibhotile eyahlukileyo yombala
Ibhotile yokutshiza emise okweqanda
Ibhotile yeplastikhi yokutshiza
Ibhotile yeseleme yobuso